Xiaomi wuxuu patent ka helay taleefan leh shaashad ku xeeran | Androidsis
Xiaomi wuxuu ku shaqeeyaa mobilka gebi ahaanba shaashadda shaashadda Xiaomi Mi Mix Alpha 2?
Maalmo ka hor ayaan kuu sheegnay taleefanka shaashadda biyo-dhaca ee Xiaomi. Qalab qaab fudud u qurux badan. Laakiin waxay u muuqataa in soo-saaraha uusan haysan wax ku filan. Wax ka badan maxaa yeelay Xiaomi ayaa hadda ka diiwaan galiyay patent cusub magaalada Hague naqshadeynta warshadaha oo kaa yaabin doonta.
Ma xasuusataa el Xiaomi Mi Mix Alfa? Taleefankaas mustaqbalka leh shaashad u muuqata inuu ku duuban yahay taleefanka marka laga reebo qadar yar oo toosan oo kamaradaha la dhigay. Hagaag hada shirkadu waxay ku guuleysatay inay xal raadiso. Natiijada? Wuu ku cajab galin doonaa.
Telefoon shaashad dhan ah
Sida aad ku aragto sawirka hogaaminaya xariiqyadan, Xiaomi waxay qaadatay talaabo kale adoo siinaya terminalkan muuqaal la yaab leh. Sida Mi Mix Alpha, shaashadda ayaa gabi ahaanba daboolaysa taleefanka. Haa, kiiskan ma jiro xarig toosan oo lagu xareeyo kaameradda.
Waana taas, shirkadda fadhigeedu yahay Beijing waxay ku guuleysatay inay ka gudubto caqabaddaas oo gebi ahaanba jabisay bilicsanaanta Mi Mix Alpha si aad u fudud: kamarad laga laaban karo oo ku qarsoon qaybta sare. Marka loo eego sawir gacmeedyada ay Xiaomi u dirtay xafiiska diiwaangelinta ee loogu talagalay ilaalinta caalamiga ah naqshadaha warshadaha (Hague International Design System), waxaa jiri doona nooc labaad oo leh kaamiro dhowr ah.
Sida iska cad, waa inaanan ku tuurin dawanno duqsiga. Soo-saaraha ayaa soo bandhigay Xiaomi Mi 11 shalay mana jirin wax raad ah oo ku saabsan qalabkan xiisaha leh. Marka waxaan noqon karnaa kahor shati aan waligiis arki doonin iftiinka. In kasta oo ay sidoo kale run tahay in, kadib sugitaan weligiis ah, waxaan ugu dambeyntii bilownay inaan aragno taleefannada ugu horreeya oo leh shaashad isku laaban Marka, waxaa laga yaabaa in soo saaraha Aasiya uu siiyo gambaleelka weyn ee 2021 isagoo soo bandhigaya taleefanka ugu horreeya shaashadda suuqa. Muuqaalkiisu wuu fiicnaan lahaa!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi wuxuu ku shaqeeyaa mobilka gebi ahaanba shaashadda shaashadda Xiaomi Mi Mix Alpha 2?
Twitter wuxuu ku sii dhowaanayaa nooc lacag ah
Asus ROG Phone 5 waa taleefanka gacanta ee xiga ee astaanta, wuxuuna la yimaadaa Snapdragon 888 iyo 16 GB oo RAM ah